Isiphi isinyathelo babe Tribulus izidakamizwa. Izibuyekezo ngeke ngikushiye ngabandayo
Akwaziwa kusukela kudala, zisetshenziswa herbaceous kuyinto sitshalo esimangalisayo kakhulu ukuthi likhula ezindaweni zamahlathi emvula e South Asia, e-Afrika, e-Europe nase-North-Australia - Tribulus terrestris, umvini oluhlabayo noma Tribulus terrestris. ingxenye yayo oyinhloko protodioscin, elisetshenziswa njengesibonakaliso booster testosterone ukuthi noma imuphi wobulili besilisa kulo muntu ngokuphelele ngaphandle empilweni. Kule ndaba kusho ngesisekelo lesi sitshalo uye wakwenza ngokuzimisela esetshenziswa sawo esiningi kanye encishisiwe izenzo zocansi.
Okuqukethwe zalesi sitshalo izinto ezifana alkaloids, flavonoid, saponins nezinye Kusizuzisa kakhulu empilweni amadoda kanye amandla. Ekulungiseleleni imincintiswano ezinkulu, Championships emhlabeni, Olympics abasubathi Sekuyisikhathi eside amazwe aseMpumalanga kwaba lesi sidakamizwa "Tribulus" lisetshenziswa. Izibuyekezo bekusolo omuhle kakhulu futhi kwaba esetshenziswa kabanzi kwezemidlalo eziningi. Lokhu ikhambi herbal ngokusho kwabanye imibiko ingahluka kancane ukwandisa ukukhiqizwa testosterone. Umphumela ekutholeni imithi yemifino "Tribulus" Izibuyekezo uqinisekise lokhu ukwandisa ukusebenza amandla futhi ukusheshisa ukukhula kwemisipha. Ngaphezu kwalokho, kukhona nokuqinisa umsebenzi wocansi, ukuqedwa ukucindezeleka, kwemizwelo ngcono. Lezi ngenxa ukukhuthazwa esishintshashintshayo ubuchopho androgen.
Izindlela ezinjalo, njengoba "Tribulus" Izibuyekezo ufanelwe hhayi kuphela iziguli kodwa futhi odokotela. Kususelwa izifundo ngaphambili odokotela okuye kungase kutholakale ukwandisa lokuhlushwa neurotransmitters ezithile Izithako isizinda prima ngoba iqukethe izinto zivimbela monoamine oxidase uhlobo A. Ngokuthatha le ibhekwa kwandisa libido, nakuba abanye odokotela wafaka lesi siphetho enkulu umbuzi.
Ngemva kokuchitha cwaningo zokugcina, wakhe ubuhanjelwe izinsizwa, abanye ososayensi benza esiphethweni okuphambene. Ngokombono wabo, lesi sitshalo akunamthelela amazinga testosterone kanye nemingcele, futhi ngaphezu kwalokho, umphumela wawo okwandisa amandla futhi yemisipha azinakwa. Kulesi sisekelo, leli qembu abacwaningi wenze esiphethweni esihlukile mayelana izidakamizwa "Tribulus" ukuthi Izibuyekezo njalo okuxoxwe - ke kuyindlela enhle futhi ngempumelelo, kodwa kuphela uma ukusebenzisa njengenhlangano aphrodisiac.
Lokhu okunezela iyatholakala ezitolo ukuthi liqalise ezemidlalo umsoco. Kuyinto zomthetho futhi akekho uhlu izinto doping. Indlela ephumelela kakhulu futhi ethandwa yilezi: "Animal Stak ngu Universal Nutrition", "Vitrix ngu Nutrex", "Prime of USPlabs", "Tribulus kusukela Optimum Nutrition sika", "T-Bomb ngu MHP", "Testrol kusukela Gat '.
Njengezinye izidakamizwa, "Trubulus" side effects kungase kudingeke uma ukuhlukunyezwa. Kungabangela yezinkinga eziyingozi kanye nemiphumela. Ngekusetjentiswa eside kwanoma iyiphi booster testosterone kunciphisa amandla omzimba ukukhiqiza ama-hormone ayo kuphela ngenxa yokuluthwa izidakamizwa. Ngakho, ngemva kokuphothula reception yayo, umzimba ngokwawo ungethele lemali edingekayo hormone ocansini yingakho kakhulu ziyancipha yemisipha, kukhona ukucindezeleka, ubuthakathaka kanye nezinye izinkinga.
Yini okunye ukwesabisa isicelo engalungile "Tribulus"? Imiphumela engemihle kungenzeka futhi avele ulaka, ukucasuka, ukuqunjelwa, kuzuba okungazelelwe blood pressure, induna kwenzeka. Kakhulu akuvamile, kodwa kukhona amacala nezinwele, yoma wamasende, feminization. It is hhayi Kunconywa ukuthatha zofuzo athambekele gynecomastia abantu.
BAA "Golden Tribulus" normalizes umsebenzi umzimba kubalulekile ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka amadoda, njengoba le ndlala wendlala yabesilisa, kusiza wendlala adenoma futhi, uma izifo kudingeka esicashile we ngomgudu womchamo, kwehle izenzo zobulili, ukuntuleka ukwakhiwa noma ejaculation ngaphambi kwesikhathi. Uma ukuzivocavoca, it kwandisa ukukhuthazela. Pidzheuma amagxolo ezikhishwe, Tribulus terrestris, amahlamvu ziyadliwa, izimpande itiye Hedysarum, izimpande Althea elomile Bergenia, zinc citrate kanye lactose ziyingxenye ihlumela "Tribulus Gold", okuyinto umthombo obengeziwe arbutin, zinc kanye tannin. Ngaphambi kokufaka isicelo qiniseka bonana nodokotela wakho kuqala. Njengoba ojwayelekile, ukuthola inkambo izinyanga 2-3, lapho BAA isetshenziswa izikhathi 1-2 ngosuku. izinyanga 2-3 kungaba liphindwe uma kunesidingo.
"Purelan 100": yokusetshenziswa
Amafutha for emalungeni Dikulja: ukubuyekezwa, izincazelo, imiyalelo
Samsung Galaxy Core 2 smartphone: Izici, incazelo, izithombe
Lake Sukkah (Anapa) - cypresses ku Krasnodar Territory